ရောင်စုံဖျ Silicon လက်ပတ်, RFID အရောင်အသွေးစုံသော Silicon လက်ကောက်, NFC ကိုအရောင်အသွေးစုံသောဆီလီကွန်လက်ပတ်, Seabreeze စမတ်ကဒ် Co. , Ltd မှမှသည်.
 » လက်ပတ် / လက်ကောက်
ရောင်စုံဖျ Silicon လက်ပတ်, RFID အရောင်အသွေးစုံသော Silicon လက်ကောက်, NFC ကိုအရောင်အသွေးစုံသောဆီလီကွန်လက်ပတ်
လက်ပတ် / လက်ကောက် Colorful Silicone Bracelet, Colorful Silicone Wristband, Colorful Soft Silicone Bracelet, ရောင်စုံဖျ Silicon လက်ပတ်, NFC Colorful Silicone Bracelet, NFC ကိုအရောင်အသွေးစုံသောဆီလီကွန်လက်ပတ်, RFID Colorful Silicone Wristband, RFID Colorful Soft Silicone Bracelet
RFID Colorful Soft Silicone Bracelet can be custom sizes, chip types, production printing processes and more. There are own molds to choose from.
ရရှိနိုင်အကြိမ်ရေ: LF 125KHz, 134.2kHz / HF 13.56MHz / လှိုင်းနှုန်းသည် UHF 860 ~ 960MHz
ရရှိနိုင်ချစ်ပ်: TK4100, EM4200, EM4305, T5577, FM11RF08, M1 S50, ငါကုတ် 2, Ultralight, ဂြိုလ်သား h3, Impinj M4 / M5, စသည်တို့ကို.
ဆက်သွယ်ရေး protocol ကို: ISO ကို 14443A, ISO ကို 15693, ISO ကို 18000-6C
အလုပ်လုပ်နှစ်ပေါင်း: ထက်ပိုပြီး 10 နှစ်ပေါင်း
အကွာအဝေးကိုဖတ်ပါ: 2~ 100cm (စာဖတ်ခြင်းအကွာအဝေး chip ကိုအမျိုးအစားနှင့်အင်တင်နာအရွယ်အစားပေါ်မူတည်ပါသည်)
အလုပ်လုပ်အပူချိန်: -30℃ ~ + 220 ℃
အရောင်: ပြာသော, အနီေရာင်, အနက်ရောင်, အဖြူ, ဝါသော, မီးခိုးရောင်, စိမ်းလန်းသော, ပန်းရောင်, ရောနှောအရောင်, စသည်တို့ကို, အရောင်ကိုသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်
ဖြစ်စဉ်: ပိုးမျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်လိုဂိုနဲ့ coding, လေဆာရောင်ခြည်ထွင်းထု, စသည်တို့ကို.
The Colorful soft silicone wristband series is developed and produced by Seabreeze Smart Card Company. It uses high quality silica gel and advanced production technology to produce high quality soft wristband products. တန်ဖိုးနည်း, suitable for your market development. This wristband can be packaged with RFID chips and can be used in access control and identification.
စတိုင်: closed round style, adjustable convex and concave buckle style, watch band buckle style
Beautiful, flexible, easy to wear, အသုံးပြုရလွယ်ကူ, ရေစိုခံ, moisture-proof, shockproof, high temperature resistant.
Widely used in swimming pools, cold storage, field operations and other extremely humid environments, even in the harsh conditions such as long-term immersion in water, can be used normally. Suitable for campuses, အပန်းဖြေဥယျာဉ်, nightclubs, music evenings, access control and identification, it can be used asahigh-end business gift.
I am interested in your product Colorful Soft Silicone Wristband, RFID အရောင်အသွေးစုံသော Silicon လက်ကောက်, NFC ကိုအရောင်အသွေးစုံသောဆီလီကွန်လက်ပတ်
prev: RFID သံမဏိစာရွက်လက်ပတ်, PaPaPa Silicon လက်ပတ် Circles, silicone PaPaPa Circles
နောက်တစ်ခု: RFID polyester elasticity လက်ပတ်, NFC ကို polyester elasticity လက်ပတ်, RFID polyester elasticity တယ်လီစကုပ်လက်ကောက်
RFID dual-အကြိမ်ရေလက်ပတ်, LF + HF dual-အကြိမ်ရေလက်ပတ်, HF + လှိုင်းနှုန်းသည် UHF dual-band ကိုလက်ပတ်
RFID TM အလိုအလျောက် Card ကို, iButton, ခလရကဒ်, ကင်းလှည့်ဝန်ထမ်းရေးရာပြန်ကြားရေး Button လေး
TM အလိုအလျောက်ချွေးပေါင်းအိမ်ဗာလက်ကောက်, TM အလိုအလျောက်စမတ် Button ကိုလက်ကောက်, TM အလိုအလျောက်ပြန်ကြားရေး Button ကိုလက်ကောက်
RFID polyester elasticity လက်ပတ်, NFC ကို polyester elasticity လက်ပတ်, RFID polyester elasticity တယ်လီစကုပ်လက်ကောက်
RFID Card ကို (134)
ချိတ်ဆက်မှု Chip ကဒ် (60)
HF Chip ကဒ် (28)
JAVA ကဒ် / CPU ကိုကတ် (13)
dual Interface Card အား / Multi ကြိမ်နှုန်း Card ကို (11)
Card အားခန့် / ဆက်စပ်ပစ္စည်း (16)
NFC ကိုထုတ်ကုန်များ (13)
RFID Crystal Epoxy Tag ကို (5)
RFID ဆကျကပျ Tag ကို (52)
anti-သတ္တု Tag ကို (16)
အခွားသော Anti-သတ္တု Tag ကို (8)
PCB Anti-သတ္တု Tag ကို (5)
သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံ Tag ကို / ဘိလပ်မြေ Tag ကို (4)
အခြားအ Dedicated Tag ကို (15)
စတစ်ကာ / ဆန့်ကျင်အတုတံဆိပ်တပ်ရန် (14)
လက်ပတ် / လက်ကောက် (17)
လှိုင်းနှုန်းသည် UHF Reader ကို (11)
module / အင်တင်နာ (16)
Card ကိုပရင်တာ (5)
အခြားအ IoT ထုတ်ကုန်များ (6)